Talyaanigu ma wuxuu ku wajahan yahay Quful Saddexaad?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Talyaanigu ma wuxuu ku wajahan yahay Quful Saddexaad?
Caafimaadka Warka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Khatarta qarsoon ee Talyaanigu ku geli karo wejiga saddexaad ee COVID-19 masiibada waxay u egtahay adhi jahwareer leh oo ay marin habaabisay adhijirkeeda iyo eeyadiisa.
Caasinimada qayb weyn oo reer Talyaani ah (gaar ahaan dhalinyarada) oo aan ilaalin ilaalinta laga soo horjeedo COVID-19 ee maalin walba ay soo saaraan hogaamiyaasha siyaasada, ayaa horseeday kor u kaca ku dhaca isqaadsiinta maalinlaha ah ee dhakhaatiirta takhasuska leh, ka hor intaan la shaacin halista wajiga saddexaad ee isku xidhka COVID-19.
Si kastaba ha noqotee, caasinimadu waxay sabab u tahay jahwareerka daran ee ay abuurtay isbeddelka maalinlaha ah ee awaamiirta hay'adaha. Ido uu marin habaabiyay adhijiruheeda iyo eeyadiisu waa adhi wareersan runtii.
Waxaa la ogyahay in wajiga labaad ee COVID-19 ee talyaaniga ay sabab u ahayd la'aanta odoroska siyaasiyiinta ee ah inay siiso xoriyad balaaran reer Talyaani intii lagu jiray xagaagii lasoo dhaafay, taas oo ku dhamaatay kororka infekshinka iyo dhimashada.
Khaladkan oo kale wuxuu ku soo noqnoqonayaa munaasabadda ciidaha Kirismaska iyo dhamaadka sanadka. Dhawaan "ku celcelin dharka" ah usbuucii la soo dhaafay oo leh iftiinka cagaaran ee iibsashada ka hor Kirismaska, dhakhaatiirta iyo hay'adaha ka digay cabsida la xaqiijiyay ee ka sii darista cudurada iyo (dhowaan) dhimashada, mar labaad sababtoo ah kuwa hogaamiya adhiga.
In kasta oo Jarmalku ku soo rogay amar adag xidhitaanka dadkiisa munaasabadaha ciidaha soo socda ilaa iyo 10-ka Janaayo, tusaale ay soo raaceen dalal kale oo Yurub ah, haddana siyaasiyiinta Talyaanigu weli way ka labalabeenayaan waxa la samaynayo Ka dib markii aan u xaqiijiyey Talyaanigu inay OK ku safrayaan xudduudaha aagagga jaallaha ah ee waddanka oo dhan, waxaa la ogeysiiyey in laga fekerayo suurtagalnimada in la samaynayo, illaa maantana kulammada maalinlaha ah waxay dhacayaan go'aan kama dambays ah.
Jahwareerkan ayaa kumanaan qof dhigay in loo abaabulo safarada tareenka iyo diyaaraddaha ee xaaladaha adag iyo suurtagalnimada la soo derista cabsida ay ka qabaan hawlwadeennada iyo ganacsatada. Maaha uguyaraan walaacyadan waa dhiirrigelinta kuwa beeniya.
Heesta Mameli (ama "Walaalaha Talyaaniga")
Waa heesta calanka oo mid ka mid ah tiirarkeeda ay ku qoran tahay: "Na soo ururi." Luqada qarnigii sagaal iyo tobnaad ee Mameli, macnaheedu waa "na ilaali midnimada." Sida muuqata dhamaan Talyaaniyiintu ma yaqaanaan heesta, waxna looma qaban si loo xusuusiyo.
Heesaha Mameli Version ee Caruurta
Sharci ahaan, barista heesaha ee iskuulada waa qasab. Kooxda heesaha carruurta, intii lagu jiray xafladii furitaanka ee Expo 2015, waxay u beddeleen dhammaadka ka-noqoshada heesaha ee Mameli sidan: aayadda, laga bilaabo "waxaan diyaar u nahay inaan dhinno" waxay noqotay "waxaan diyaar u nahay inaan noolaano," ayuu Talyaanigu ugu yeeray. Ma waxaan rabnaa inaan carruurta ka qaadno rajadan?
Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha
Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha (UDHR) waa dukumiinti dhiirigelin leh oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda lama-taabtaanka ah ee aadanaha, oo ah xeerar ku saleysan guulo badan oo rayid ah 70kii sano ee la soo dhaafay. Eleanor Roosevelt wuxuu ugu yeeray "Magna Carta of Humanity."
“Xuquuqda aadanaha ee lama-taabtaanka ah” - xaaladdan oo kale, dowladda waa inay kormeertaa!
Sidee Japan u ilaalinaysaa infekshannada oo hooseeya
Japan, waa dal ay dadkiisu aad u tiro badan yihiin oo ay ku noolyihiin 126 milyan oo qof isla markaana ay ugu badan yihiin dadka waayeelka ah ee adduunka ku nool, illaa iyo hadda waxaa aad u yar tirada dhimashada ee COVID-19. Dhammaanba waxaa jiray, 2,446 dhimasho (in ka yar marka loo eego hal maalin oo ka jirta Mareykanka xilligan), iyadoon loo adeegsan istiraatiijiyad tijaabo ah oo dagaal ah, "3Ts" caan ah oo badanaa wax laga qoro. Taa baddalkeeda, Japan waxay ku tiirsan tahay waxa loogu yeero "3Cs" si looga fogaado: "meelaha xiran, meelaha dadku ku badan yahay, iyo goobaha xiriirka dhow." (xigasho: ilCorriere.it)
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee faafa ee COVID-19 ayaa ah in ku dhowaad adduunka oo dhan isla mar ahaantaana, ay caddeeyeen kala duwanaanshaha habka waddamada kala duwan ee dhibaatada caafimaadka iyo natiijooyinka ay heleen. Doodda Talyaaniga, waxaa jiray hadal heyn badan oo ku saabsan kiiska Iswiidhishka ama - liddi ku ah - istiraatiijiyadda Kuuriyada Koofureed, laakiin ku dhowaad waxba kuma ahan tan Japan. Dhaqaaleyahanku wuxuu ka hadlayaa tan, si kastaba ha noqotee, maqaal laga soo qaatay casharo waxtar u leh Talyaaniga ayaa sidoo kale laga soo qaadan karaa (oo ay weheliso ka warqabka xaddidooda).
3Cs ka sokow, dowladda Japan waxay ka digeysaa 5 qatar oo gaar ah oo ay ku jiraan cashooyin khamri, cabbitaan iyo cunid kooxo ka badan 4, iyo kuhadal la’aan wajiga wajiga meel dhow. Dabcan, aragtiyahaasi waxba ma tarin haddii dadka caadiga ahi iska indhatiraan. Laakiin Jabbaanku waxay dhagaysteen taladii dawlada ee ahayd inay guryahooda joogaan oo karantiil ka samaystaan ​​haddii ay muujiyaan astaamaha coronavirus, xitaa haddii digniintaasi aysan lahayn wax qiimo sharci ah.
Kuwani waa sharciyo sidoo kale laga raaci karo Talyaaniga, laakiin qodobka muhiimka ahi waa intaas uun. Diyaar ma u tahay Talyaanigu inuu sameeyo? Dowladda Talyaaniga, iyadoo ku adkeysaneysa cunaqabateynta, waxay muujisay inaysan aaminin muwaadiniinteeda. Laakiin waxa sidoo kale ka maqan isgaarsiinta cad oo aan mugdi ku jirin ee hay'adaha. Waxaa laga yaabaa in Talyaanigu halkaas ka bilaabo.